Italia: 100 kun oo muslimiin oo ku masjid la magaalada Milano | Gaaloos.com
Home » ila-tali » Italia: 100 kun oo muslimiin oo ku masjid la magaalada Milano
Tirada muslimiinta ku nool magaalada Milano oo ah magaalo ganacsi kuna taalo waqooyiga Italia ayaa la sheegay in ay gaarayaan tirada muslimiinta 100 kun oo qof, inta badan muslimiinta ayaa dad ka soo haajiray dalalkale, halka dadka reer Milano aan aheen soo gaootiga lagu sheegay in ay yihiin 5 Kun oo Muslimiin ah.
Waxaa sii laba laabmaya tirada dadka muslimiinta magaalada Milano 100%, sida lagu xusay tira koob ay sameesay dowlada ayaa lagu sheegay in sanadka 2005ta muslimiinta Milano ay aheed tiro ahaan 50 kun oo muslim ah.
Inta badan Muslimiinta magaalado milaano ayaan heesan meelo uqalmada in ay ku dukadaan ama ku cibaadeestaan, iyagoo ka codsaday muslimiinta caalamka in ay u dhisaan masaajidyo.
Xigashada warka: Stranieriinitalia
NB: warbixintaan waxaa la qoray sanadki 2011 ka tolow hada yaa ka war haayo oo nooga soo warami kara milano italy.
Aqriso warka isaga oo af Italy ah
Title: Italia: 100 kun oo muslimiin oo ku masjid la magaalada Milano
Posted by Unknown, Published at 7:10 PM and have 0 comments